Ny Tenin’Andriamanitra – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
« MOA FANTATRAO VA IZAY VAKINAO? » (Asa 8:30)
SAROPADY AMIN’NY FIANGONANA LOTERANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Isan’ny antony mahatonga ny polipitra fitoriana Teny ho amin’ny toerana avo indrindra miohatra amin’ny zavatra hafa rehetra ao am-piangonana dia noho ny ny Teolojia Loterana izay mametraka ny Tenin’Andriamanitra ho ambony indrindra. Izy no fahefana ambony indrindra ary ny Teny irery ihany no afaka mamorona finoana ao anatin’ny olona. Ao anatin’ny Teny (=Toriteny, vakiteny, hira fiderana) dia misy Lalàna sy Filazantsara izay anambaran’Andriamanitra fa mpanota sy very ny olona iray ka mila an’Andriamanitra hamonjy azy amin’ny alalan’ny Fahasoavany. « Eo amin’ny fihainoana ny Teny no isehoan’ny fahagagana lehibe indrindra » hoy i Lotera satria eo no iovan’ny mpanota voaheloka sy very ho olona voamarina sy tonga zanaka malala.
NY TENIN’ANDRIAMANITRA NO IVON’NY LITORJIAN’NY FIANGONANA LOTERANA.
Noho izany dia tena zava-dehibe ny fitoriana ny Teny amin’ny fomba madio sy marina. Izany no mahatonga ny Fiangonana Loterana ho sarotiny amin’ny olona afaka mitory teny ao am-piangonana satria izay fahadisoana ataony amin’ny fanazavana ny Teny toriny na ampianariny dia mahatonga fahadisoana sy fahaverezana ho an’ireo izay mihaino azy.
Asa roa goavana no tsy maintsy ataon’ny mpitory Teny raha te hitory marina ny Tenin’Andriamanitra izy dia ny heviteny (Exegèse) sy ny hermeneotika na hermeneutique (fitondra na fampiharana ny teny amin’ny mpihaino ankehitriny).
Ny heviteny dia fanazavana ny hevitr’ilay teksta tamin’ilay mpanoratra sy ireo nihaino azy ary ny hermeneotika kosa dia ny heviny sy izay azontsika iainana izany ankehitriny.
Azon’ny olona rehetra atao ny manao heviteny fa tsy « secret » na tsiambaratelo ho an’ny Teolojiana ihany izany. Na dia izany aza anefa dia misy fahalalana tsy maintsy ananan’izay te hanao izany. Ny antony dia satria ny mpanao heviteny dia tsy maintsy mahafantatra ny “contexte” sy ny tantara nitenenan’ilay mpanoratra ao amin’ny Baiboly sy ny fiteny nanoratany. Ny Testamenta Taloha dia voasoratra tamin’ny teny Hebreo sy Aramaika ary ny Testamenta Vaovao kosa dia tamin’ny teny Grika Koiné. Tsy midika anefa izany fa tsy afaka na tsy mahazo manao heviteny izay tsy mahay ireo fiteny biblika ireo. Efa misy ireo fitaovana sy fandikanteny izay azo iankinana ankehitriny.
Ohatra: Raha voasoratra ao amin’ny Baiboly hoe nandihy sy nitehaka ny olona dia mila fantatr’ilay mpanao heviteny hoe taiza izy ireo no nanao izany ary tamin’ny fotoana nanao ahoana. Noho izany dia mila mahafantatra mikasika ny “institution” jiosy izy, indrindra ny firafitry ny tempoly ary ireo fihetsika fanaon’ny Jiosy sy ny fitafiana anaovany rehefa midera an’Andriamanitra. Tsy hoe rehefa voalaza ao amin’ny Baiboly dia tsy maintsy hataon’ny Fiangonana. Ary tsy hoe rehefa tsy voasoratra dia tsy azo atao.
Ireto misy fitaovana vitsivitsy azon’ny mpanao heviteny ampiasaina amin’ny fanazavana ny teksta iray. Ny dikanteny azo antoka raha frantsay dia ny Bible francais courant, TOB, raha anglisy dia ny NRSV (New Revised Standard Version). Tsy maintsy mila boky fanazavana (commentaire) rehefa manao heviteny. Misy ireo teny sarotra izay tsy misy amin’ny kolontsaina misy antsika ka tsy maintsy ilana fanazavana, toy ny anaran-tanàna, anaran’olona na teny sarotra toy ny « aviavy », refy toy ny « stadio », vola toy ny « sekely » sns….
Raha mila fanazavana toy izany dia azonao ampiasaina ny NBS (Nouvelle Bible Second version Etude) izay misy fanazavana sy “note de bas de page” amin’ireo teny sarotra. Raha ny anglisy no manavanana dia misy ny NET Bible izay azo jerena amin’ny internet, ity no isan’ny manankarena indrindra satria manampahaizana marobe no manao ireo fanazavana hita ao anatiny sady misy fanomezana ireo hevitra samihafa avy amin’ny mpikaroka. Ho an’ireo manana solosaina dia misy ny logiciel antsoina hoe THE WORD azonao alaina sy “installer”-na maimaimpoana. Izay indray aloha fa amin’ny manaraka dia hanao fampiharana izany isika.